Baiboly pejy 36 - Ny Baiboly
Voalohany < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Manaraka Farany
Eksaody toko 9 (tohiny)
10Koa nandraoka lavenona tao amin'ny lafaoro lehibe izy ireo, dia nankany anatrehan'i Faraona, ary nataon'i Moizy savoan-danitra ny lavenona, ka nahatonga boiboika, nipoipoitra ho vay tamin'ny olona sy ny biby. 11Tsy afaka niseho teo anatrehan'i Moizy ny mpanao ody azon'ny vay; fa voan'ny vay ny mpanao ody sahala amin'ny Ejipsiana rehetra koa. 12Nohamafisin'ny Tompo anefa ny fon'i Faraona ka tsy nihaino an'i Moizy sy Aarona Faraona, araka ny efa voalazan'ny Tompo tamin'i Moizy.
33Niala avy ao amin'i Faraona ary nivoaka ny tanàna Moizy, dia nanandratra ny tànany tany amin'ny Tompo, ka ny kotrok'orana sy ny havandra nitsahatra, ary ny ranonorana nijanona tsy nilatsaka tamin'ny tany intsony. 34Fa Faraona kosa nony nahita fa nitsahatra ny ranonorana sy ny havandra ary ny kotrok'orana, dia mbola nanohy ny fahotany indray. 35Nihadonto ny fon'i Faraona ka tsy nalefany handeha ny zanak'Israely, araka ny efa voalazan'ny Tompo tamin'ny vavan'i Moizy.
Eksaody toko 10
Loza fahavalo, ny valala - Fahasivy, ny aizina.
1Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mankanesa any amin'i Faraona, fa efa nahadonto ny fony sy ny fon'ny mpanompony aho, hanaovako ny famantarako eo afovoany, 2mba hotantarainao amin'ny zanakao aman-jafinao ny zava-dehibe nataoko tany Ejipta, sy ny famantarana vitako teo amin'izy ireo, ka ho fantatrareo fa Iaveh aho. 3Dia nankany amin'i Faraona Moizy sy Aarona ka nanao taminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo, Andriamanitry ny Hebrio: Mandra-pahoviana no handavanao tsy hietry eo anatrehako? Alefaso ny vahoakako hanompo ahy. 4Fa raha mandà tsy handefa ny vahoakako hianao, indro aho handefa valala hanenika ny taninao rehetra, rahampitso. 5Ho rakotra azy ny tany, tsy ho hita hirangirana ny tany; holevoniny avokoa ny sisa tsy voa izay navelan'ny havandra ho anareo; hohaniny daholo ny hazo maniry any an-tsaha, 6ho hipoka azy avokoa ny tranonao sy ny tranom-panomponao, ary ny an'ny Ejipsiana rehetra. Tsy mbola nisy nahita loza toy izany na ny rainao na ny raibenao, hatrizay nisiany tety ambonin'ny tany, ka mandrak'ankehitriny. Dia lasa Moizy, ka niala teo amin'i Faraona.
7Ka hoy ny mpanompon'i Faraona taminy: Mandra-pahoviana no ho fandrika ho antsika ralehilahy iny? Alefaso handeha ireo olona ireo, hanompoany an'ny Tompo Andriamaniny. Tsy mbola hitanao ve fa efa ho levona ity Ejipta? 8Dia nasaina niverina ho eo amin'i Faraona Moizy sy Aarona, ka hoy izy taminy: Mandehana àry, manompoa an'ny Tompo Andriamanitrareo. Iza avy moa no tsy maintsy mankany? 9Ary hoy ny navalin'i Moizy: Hankany avokoa izahay omban'ny ankizy sy ny antidahy, ny zanakay lahy aman-janakay vavy, ny ondry sy ny ombinay, fa fety fankalazana an'ny Tompo izany ho anay. 10Fa hoy Faraona tamin'izy ireo: Homba anareo anie Iaveh, araka ny hamelako anareo handeha, dia hianareo sy ny zanakareo. Tandremo fa manan-kevi-dratsy hianareo! 11Tsia, hianareo lehilahy no mandehana ka manompoa an'ny Tompo, fa izany ihany no angatahinareo. Dia noroahina hiala teo anatrehan'i Faraona izy ireo.
12Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Ahinjiro eo ambonin'ny tany Ejipta ny tànanao ny amin'ny valala; aoka hiakarany ny tany Ejipta; aoka handevona ny ahitra rehetra amin'ny tany izy, izay sisan-kavandra rehetra. 13Dia nahinjitr'i Moizy teo ambonin'ny tany Ejipta ny tehiny, ka nandefa rivotra avy any atsinanana Iaveh hifofofofo amin'ny tany iny tontolo andro iny, sy iny tontolo alina iny. Nony maraina, indro tongan'ny rivotra avy any atsinanana ny valala. 14Niakatra amin'ny tany Ejipta manontolo. Loza ny habetsahany, fa tsy mbola nisy izay toy izany, ary tsy hisy intsony koa ny toy izany. 15Rakotra azy ny tany rehetra, maizina ny tany azon'ireny. Levona avokoa ny ahitra tamin'ny tany, mbamin'ny voan'ny hazo, izay sisan-kavandra rehetra; tsy nisy niangana ny zava-maitso tamin'ny hazo sy tamin'ny ahitra any an-tsaha eran'ny tany Ejipta tontolo.
16Koa nampanalain'i Faraona faingana Moizy sy Aarona nilazany hoe: Efa nanota tamin'ny Tompo Andriamanitrareo sy taminareo aho. 17Nefa mbola avelao re ny fahotako, fa ity indray mandeha ity ihany. Mangataha amin'ny Tompo Andriamanitrareo mba hanafahany ahy ahay, amin'ity loza mahafaty izy. 18Niala avy ao amin'i Faraona Moizy, dia nangataka tamin'ny Tompo, 19ka rivotra avy any andrefana kosa indray no nampifofofofoin'ny Tompo mafy ka nipaoka ny valala, sy namarina azy amin'ny ranomasina Mena; ary tsy nisy tafajanona ny valala, na dia tapikany iray aza, tany Ejipta tontolo. 20Nohamafisin'ny Tompo anefa ny fon'i Faraona ka tsy nalefan'i Faraona handeha ny zanak'Israely.
21Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Ahinjiro manandrify ny lanitra ny tànanao, hisian'ny aizim-pito amin'ny tany Ejipta, sady aizina azo tsapain-tànana. 22Dia nahinjitr'i Moizy nanandrify ny lanitra ny tànany, ka nisy aizim-pito ny tany Ejipta tontolo, nandritra ny hateloana. 23Tsy nifankahita izy ireo ary tsy nisy niainga niala tamin'ny toerana nisy azy nandritra ny hateloana; fa ny zanak'Israely kosa nahazo mazava teo amin'izay toerana nonenany.
24Koa nampaka an'i Moizy Faraona nilazany hoe: Mandehana hianareo, manompoa an'ny Tompo, ka ny ondry sy ny ombinareo ihany no hijanona; fa na dia ny zanakareo madinika aza mahazo mandeha miaraka aminareo koa.
Pejy: Voalohany < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2643 seconds